China Usb-C hub-CH06B ifektri abakhiqizi | Iqembu leBrocade
Ukudluliswa kwedatha yamachweba amathathu we-USB 3.0 kufika kuma-5Gbps. Nweba isikrini sakho ngembobo ye-HDMI ku-HDTV, ukuqapha noma iprojektha. Sekela ukuphuma kwe-HDMI kuze kufike ku-4K UHD (3840x2160 @ 30Hz) resolutionutio
Selokhu kwasungulwa inkampani yethu, sibonile ukubaluleka kokuhlinzeka ngemikhiqizo esezingeni eliphakeme kanye nezinsizakalo ezingaphambi kokuthengisa nangemva kokuthengisa.
Izinkinga eziningi phakathi kwabahlinzeki bomhlaba wonke namakhasimende zibangelwa ukuxhumana okungalungile. Ngokwesiko, abahlinzeki banganqikaza ukubuza izinto abangaziqondi. Brocade phula lezo zithiyo ukuze uqinisekise ukuthi uthola okufunayo kufinyelela ezingeni olilindeleyo, ngesikhathi olifunayo.
Langaphambilini Usb-C ihabhu-CH06A
Olandelayo: Usb-C ihabhu-CH07A
3 * i-USB3.0 Kuze kufike ku-5Gbps
1 * TD Kuze kufike ku-90MB / s
1 * SD Kuze kufike ku-90MB / s
Imibala grey esiliva noma omunye umbala ongakhetha kuwo
Izinga lokushisa elisebenzayo -40 ° C ~ 60 ° C
Incazelo ephezulu neZero Latency 4K HDMI Nweba ...